मङ्गलबार ०७, साउन २०७६ ००:३३
प्राथमिक तहः शनिबारसम्म कुन–कुन जिल्लाको नतिजा सार्वजनिक? (नामसहित)
शनिबार, २८ असार २०७६ बुलबुल नेपाल
शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक तहको खुलातर्फको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने क्रममा शनिबार दिउँसोसम्म ६८ जिल्लाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले गत असोज १३ गते लिएको प्रा.वि तहको परीक्षाको नतिजा असार १० गतेदेखि सार्वजनिक गर्न सुरु गरेको हो ।
टि–२० सिरिजः पारसको शानदार ब्याटिङ, नेपाल ७ विकेटले विजयी
टि–२० सिरिज अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपालले मलेसियालाई ७ विकेटले हराएको छ । कप्तान पारस खड्काको शानदार व्याटिङमा मलेसियाले दिएको १२९ रनको लक्ष्य नेपालले १८.३ ओभरमा ३ विकेट गुमाएर पूरा गर्यो ।
मलेसियाविरुद्ध कप्तान खड्काको शानदार अर्धशतक (LIVE)
टि–२० सिरिज अन्तर्गत पहिलो खेलमा मलेसियाविरुद्ध नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान पारस खड्काले अर्धशतक पूरा गरेका छन् । उनले ३ छक्का र ५ चौकाको मद्दतमा ३२ बलमा अर्धशतक पूरा गरेका हुन् । मलेसियाले दिएको १२९ रनको लक्ष्य पछ्याउँने क्रममा नेपालले ११.३ ओभरमा तेस्रो विकेट गुमायो ।
नेपाललाई पहिलो झड्का, प्रदीप ८ रनमा आउट (LIVE)
टि–२० सिरिज अन्तर्गत पहिलो खेलमा मलेसियाले दिएको १२९ रनको लक्ष्य पछ्याउँने क्रममा नेपालले पहिलो विकेट गुमाएको छ । नेपालले पहिलो विकेटकारुपमा प्रदीप ऐरीलाई ८ रनमा गुमाएको हो । उनलाई फित्री सामले क्याच आउट गराए ।
टि–२० सिरिजः मलेसियाले दियो नेपाललाई १२९ रनको लक्ष्य
टि–२० सिरिज अन्तर्गत पहिलो खेलमा मलेसियाले नेपाललाई १२९ रनको लक्ष्य दिएको छ । टस जितेर ब्याटिङ रोजेको मलेसियाले निर्धारित २० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर १२८ रन बनायो । उसका लागि विरन्दीप सिंहले ५७, फित्री सामले १२, कप्तान अहमद फिजले ४५, मुहम्मद सयादतले ८ रनको योगदान दिए ।
टी–२० सिरिजः मलेसियाको चौथो विकेट पतन (LIVE)
मलेसिया विरुद्धको टि–२० सिरिज अन्तर्गत पहिलो खेलमा टस हारेर बलिङको मौका पाएका नेपालले तेस्रो विकेट लिएको छ । नेपाललाई तेस्रो सफलता दिलाउने क्रममा बसन्त रेग्मीले विरन्दीप सिंहलाई ५७ रनमा आउट गरे । यसअघि सन्दीप लामिछाने र सोमपाल कामीले एकएक विकेट लिइसकेका छन् ।
टी–२० सिरिजः सन्दीपले लिए पहिलो ओभरमै विकेट (LIVE)
मलेसिया विरुद्धको टि–२० सिरिज अन्तर्गत पहिलो खेलमा टस हारेर बलिङको मौका पाएका नेपालले दास्रो विकेट लिएको । नेपाललाई दोस्रो सफलता दिलाउने क्रममा सन्दीप लामिछानेले आफ्नो पहिलो ओभरको पहिलो बलमा विकेट लिन सफल भए ।
नेपाल भर्सेस मलेसियाः पहिलो ओभरमै सोमपालले लिए विकेट (LIVE)
मलेसिया विरुद्धको टि–२० सिरिज अन्तर्गत पहिलो खेलमा टस हारेर बलिङको मौका पाएका नेपालले उत्कृष्ट सुरुवात गरेको छ । नेपालले पहिलो ओभरमै विकेट लिन सफल भएको छ । नेपाललाई पहिलो सफलता दिलाृने क्रममा सोमपाल कामीले आफ्नो पहिलो ओभरको पाँचौ बलमा विकेट लिन सफल भएका हुन् ।
नेपाललाई बलिङको मौका, प्लेइङ ११ मा को–कोले पाए मौका?
मलेसिया विरुद्धको टि–२० सिरिज अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपाले टस हारेर बलिङको मौका पाएको पाएको छ । आईसीसी टि–२० विश्वकप छनोट प्रतियोगिताको तयारीमा रहेको नेपालले मलेसियासँग खेलिरहेको हो । नेपाल र मलेसियाबीचको खेल नेपाली समयअनुसार बिहान ७ः४५ बजेदेखि सुरु हुँदैछ ।
आज ३ जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा प्रकाशित
शुक्रबार, २७ असार २०७६ बुलबुल नेपाल
शिक्षक सेवा आयोगले शुक्रबार खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षातर्फ प्राथमिक तहको ३ जिल्लाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले आज गोरखा, चितवन र भक्तपुर जिल्लाको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो ।
राशिद खान अफगानी क्रिकेट टिमको नयाँ कप्तान
चर्चित लेग स्पिनर राशिद खान अफगानिस्तान क्रिकेट टिमको कप्तानमा नियुक्त गरिएको छ । एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा अफगानिस्तानले खराब पदर्शन गरेको भन्दै गुल्बन्दिन नाइबलाई हटाएर राशिदलाई कप्तानमा नियुक्त गरिएको हो । अब उनले तीन आटै फम्र्याटमा कप्तानको भूमिका निर्वाह गर्ने छन् ।
विश्वकप क्रिकेटः २७ वर्षपछि इंग्ल्याण्ड फाइनलमा
बिहिबार, २६ असार २०७६ बुलबुल नेपाल
पाँच पटकको विजेता अष्ट्रेलियालाई ८ विकेटले हराउँदै इंग्ल्याण्ड १२औं संस्करणको आइसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । इंग्ल्याण्ड २७ वर्षपछि वान डे विश्वकपको फाइनलमा प्रवेश गरेको हो । सेमिफाइनल खेलमा अष्ट्रेलियाले दिएको २२४ रनको सामान्य लक्ष्य इंग्ल्याण्डले ३२.१ ओभरमा २ विकेट गुमाएर पूरा गर्यो ।
आज ४ जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा सार्वजनिक
शिक्षक सेवा आयोगले बिहीबार खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षातर्फ प्राथमिक तहको ४ जिल्लाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले बिहीबार कास्की, रसुवा, स्याङजा र मकवानपुर जिल्लाको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो ।
इंग्ल्याण्डको उत्कृष्ट प्रदर्शन, रोयको अर्धशतक पूरा
१२औं संस्करणको आइसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटको समिफाइनल खेलमा अष्ट्रेलियाविरुद्ध इंग्ल्याण्डका ओपनर जोसन रोयले अर्धशतक पूरा गरेका छन् । उनले २ छक्का र ७ चौकाको मद्दतमा ५० बलमा अर्धशतक पूरा गरेका हुन् । जारी विश्वकपमा रोयको चौथो अर्धशतक हो ।
विश्वकप सेमिफाइनलः २२३ रनमै समेटियो अष्ट्रेलिया
२औं संस्करणको आइसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटको दोस्रो सेमिफाइनलमा पाँच पटकको विजेता अष्ट्रेलियाले इंग्ल्याण्डलाई २२४ रनको मध्यम लक्ष्य दिएको छ । टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको अष्ट्रेलियाले ४९ ओभरमा सम्पूर्ण विकेट गुमाएर २२३ रन मात्र बनाउन सक्यो ।
गायक फुलाराको ‘म आउने प्रहर’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
गायक हरिदत्त फुलाराको नयाँ नेपाली रोमान्टिक गीत सार्वजनिक गरिएको छ । गायक फुलाराको ‘म आउने प्रहर..’ बोलको नयाँ गीत युट्युबमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । एकपछि अर्को गीत बजारमा ल्याइरहेका उनको यो गीतमा जानु लिम्बुको शब्द, महाराज थापाको एरेन्ज, कम्पोज गायक फुलाराकै रहेको छ ।
रशिदको घातक बलिङ, अष्ट्रेलियालाई सातौं झड्का
१२ औं संस्करणको एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटको दोस्रो सेमिफाइनल अन्तर्गत घरेलु टिम इंग्ल्याण्डविरुद्ध अष्ट्रेलियाले खराब प्रदर्शन गरेको छ । टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको अष्ट्रेलियाले ३७.४ ओभरमा ७ विकेट गुमाइसकेको छ ।
विश्वकप सेमिफाइनलः संकटकाबीच स्मिथको अर्धशतक पूरा
१२ औं संस्करणको एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटको दोस्रो सेमिफाइनल अन्तर्गत घरेलु टिम इंग्ल्याण्डविरुद्ध अष्ट्रेलियाका स्टिभ स्मिथले अर्धशतक पूरा गरेका छन् । उनले ४ चौकाको मद्दतमा ७२ बलमा बलमा संकटकाबीच अर्धशतक पूरा गरेका हुन् ।
अष्ट्रेलियाकाे विकेट पतन रोकिएन, पीटर ४ रनमा आउट
१२ औं संस्करणको एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटको दोस्रो सेमिफाइनल अन्तर्गत घरेलु टिम इंग्ल्याण्डविरुद्ध अष्ट्रेलियाले खराब सुरुवात गरेको छ । टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको अष्ट्रेलियाले ६.१ ओभरमा १४ रन बनाउँदा महत्वपूर्ण ३ विकेट गुमाइसकेको छ ।
अष्ट्रेलियालाई दोस्रो झड्का, वार्नर ९ रनमा आउट
१२ औं संस्करणको एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटको दोस्रो सेमिफाइनल अन्तर्गत घरेलु टिम इंग्ल्याण्डविरुद्ध अष्ट्रेलियाले खराब सुरुवात गरेको छ । टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको अष्ट्रेलियाले २.४ ओभरमै महत्वपूर्ण २ विकेट गुमाइसकेको छ ।
अष्ट्रेलियाको खराब सुरुवात, कप्तान फिन्च शून्यमै आउट !
१२ औं संस्करणको एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटको दोस्रो सेमिफाइनल अन्तर्गत घरेलु टिम इंग्ल्याण्डविरुद्ध अष्ट्रेलियाले खराब सुरुवात गरेको छ । टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको अष्ट्रेलियाले १.१ ओभरमै पहिलो विकेटकारुपमा कप्तान आरोन फिन्चलाई शून्य रनमा गुमाएको हो ।
अष्ट्रेलियाले टस जित्यो, को–कोले पाए प्लेइङ ११ मा मौका?
१२औं संस्करणको आइसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटको दोस्रो सेमिफाइनल अन्तर्गत घरेलु टोली इंग्ल्याण्डविरुद्ध अष्ट्रेलियाले टस जितेर ब्याटिङ रोजेको छ । यी दुई टिमबीचको खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो ३ः१५ बजेदेखि बर्मिङ्घमका सुरु हुँदैछ । लिग चरणमा अस्ट्रेलियाले इंग्ल्याण्डलाई ६४ रनले हराएको थियो ।
३६६ असई सईमा बढुवा सिफारिस (नामावलीसहित)
प्रहरी प्रधान कार्यालयले ३६६ जना प्रहरी सहायक निरीक्षक (असइ) लाई प्रहरी नायब निरीक्षक (सइ) मा बढुवा सिफारिस गरेको छ। बढुवा समितिको बुधबार बसेको बैठकले उनीहरूलाई बढुवा सिफारिस गरेको हो।
बुधबार राति तीन जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा सार्वजनिक (नामसहित)
शिक्षक सेवा आयोगले बुधबार राति खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षातर्फ प्राथमिक तहको ३ जिल्लाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले बुधबार तनहुँ, बारा र लमजुङ जिल्लाको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो ।
अष्ट्रेलिया र इंग्ल्याण्डको खेल आज, प्लेइङ ११ मा को–कोले पाउलान् मौका?
१२ औं संस्करणको एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटको दोस्रो सेमिफाइनलमा आज पाँच पटकको विजेता अष्ट्रेलिया र अहिलेसम्म उपाधि जित्न नकसकेको इंग्ल्याण्ड भिड्दै छन् । यी दुई टिमबीचको खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो ३ः१५ बजेदेखि बर्मिङ्घममा सुरु हुँदैछ । लिग चरणमा अस्ट्रेलियाले इंग्ल्याण्डलाई ६४ रनले हराएको थियो ।